တူမောင်ညို – နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲ ဟာ ဗိုလ်တင်အေး လက်ခုပ်ထဲက ရေ | MoeMaKa Burmese News & Media
ငြိမ်းချမ်းရေးစည်တော်ကြီးကို မည်သူတွေ တီးခတ်ကြမည်နည်း (Ashin Dhamma Piya)
ကိုသန်းလွင် - ရူးဆိုးတစ္ဆေ
နှင်းနှင်းမွှေး - ဆိတ်သောနှုတ်များ ပွင့်နိုင်ကြပါစေ
တူမောင်ညို – နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲ ဟာ ဗိုလ်တင်အေး လက်ခုပ်ထဲက ရေ
နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲ ဟာ ဗိုလ်တင်အေး လက်ခုပ်ထဲက ရေ
တူမောင်ညို (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၃ ရက်)
ကြာလေ၊ ကြာလေ ဗိုလ်သိန်းစိန်၊ ဗိုလ်ရွှေမန်း၊ ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်၊ ဗိုလ်တင်အေးတို့ရဲ့ “စည်းကမ်းပြည့်ဝသောပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစနစ်”ဟာ မရှိတဲ့“ဒီမိုကရေစီ”ပိန်လှီလာသလောက်၊ “စည်းကမ်း” တွေကတော့ဖြင့် ကုန်ဈေးနှုန်းနဲ့အပြိုင် မိုးလုံးပြည့် လျှံတက် လို့လာနေပါတယ်။
ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်တင်အေး ပြောစကားတွေ ( ပိတ်ပင်၊ ကန့်သတ်၊ ချုပ်ချယ်ရေး ဥပဒေဖြစ်လာမယ့်စကားတွေလို့ ဆိုရင် ပို မှန်ပါ့လိမ့်မယ်) နဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ ဒီချုပ်ပါတီကနေ ဒီမိုကရေစီရပ်ခံချက်ရှိရှိနဲ့ ဝေဖန်ချက်တွေ၊ ကြေညာချက်တွေ ထွက်လာမလား ဆိုပြီး ကျနော်မျှော်ကြည့်နေမိပါတယ်။ မတရားတဲ့ “အမိန့်၊အာဏာ၊ဥပဒေ၊ဥပဒေဖြစ်လာမည့်စကား” စတာတွေကို တာဝန်အရဖီဆန်ကြရ မယ်၊ တွန်းလှန်ကြရမယ်မဟုတ်လား။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားပါတီတွေအဖို့ လက်နှေးနေဖို့၊ တွေဝေနေဖို့၊ ပျက် ကွက်နေဖို့ မသင့်တော်ဘူးမဟုတ်လား။ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ တစ်စုံတစ်ခုကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြလေသလားလို့လည်း စဉ်းစားမိပါတယ်။ သူ့ဝမ်းနာ သူသာသိကြပါလိမ့်မယ်။
ဒီချုပ်ပါတီ လှည်းကူးအမတ် ပြောသံတော့ကြားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လွှတ်တော်အမတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပြောတာလား၊ ပါတီကိုယ်စားပြုပြီးပြောတာလားဆိုတာ မကွဲပြားပါဘူး။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတာ လွှတ်တော်အမတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ရော၊ ဒီမိုကရေစီ ပါတီတစ်ရပ်အနေနဲ့ရော တညီထဲ၊ တစ်သံထဲထွက်ပြီး တိတိ ကျကျ ရှင်းရှင်းပြောဆို၊ ဝေဖန်၊ ကန့်ကွက်၊ဆန့်ကျင်ကြရမယ့်ကိစ္စ မဟုတ် လား။ ကျနော့်အမြင်ကတော့ ဒီကိစ္စဟာဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေကို ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီမိုကရေစီ ကိုတကယ်တန်းလိုလားတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊လွှတ်တော်အမတ်တွေစုပေါင်းပြီး ညီညီညွတ်ညွတ်၊ပြတ်ပြတ်သားသားဆန့်ကျင်ကန့်ကွက် ရမယ်လို့မြင်ပါတယ်။
ဒီချုပ်ပါတီအပေါ် သရော်စော်ကား ပြောဆိုတဲ့ ကြံ့ဖွံ့အမတ်ဗိုလ်လှဆွေကို တရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလည်း ဘယ်အခြေဆိုက်နေ ပြီလည်း မသိပါဘူး။ ဗိုလ်လှဆွေကတော့ ဗိုလ်တင်အေးပြောတဲ့စကားတွေကို ထောက်ခံပြီး ဒီချုပ်ပါတီကို ထပ်မံစော်ကားမော်ကား ပြော နေတုန်းဖြစ်ပါတယ်။ မှန်းကြည့်ရတာတော့ ဗိုလ်လှဆွေကိုတရားစွဲဆိုမယ်လို့ဆိုတဲ့ ခြေလှမ်းကလေးတွေလည်း “ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး မြူမှုန်မှိုင်း”တွေကြားမှာ တွေဝေတုန့်ဆိုင်းပြီး ခရီးဘယ်မတွင်ဖြစ်နေရှာတယ်နဲ့တူပါရဲ့။
ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်တင်အေးကလည်း ဗိုလ်သိန်းစိန်၊ ဗိုလ်ရွှေမန်း၊ ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်တို့နဲ့ တစ်ကျိတ်ထဲ တစ်ဉာဏ်ထဲ၊ တစ်သွေးထဲတစ်သံထဲ “၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူ”ဖြစ်ပါတယ်။ “စစ်သား ၂၅% လွှတ်တော် ထဲမှာရှိရ မယ်”လို့ ရပ်တည်စွဲမြဲနေသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲ ဆိုတာလိုပဲ။ ဒီတပ်ထဲက ဒီငနဲတွေဟာ [သမ္မတ၊ နာယက၊ ကာချုပ်၊ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဆိုပြီး နေရာတွေ၊ ဌာနတွေ၊ အသွင်သဏ္ဍာန်တွေကွဲနေပေမယ့်၊ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လာရင်၊ ပုဒ်မ ၆ (စ) စတာ တွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ] ဒီသဘောထားနဲ့ဒီရပ်တည်ချက်ကို တစ်သံထဲပြောကြတာ ဘာမှမဆန်းပါဘူး။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်တင်အေးပြောတဲ့စကားတွေကို အသေချာနားထောင်ကြည့်ပါ၊ ဖတ်ကြည့်ပါ၊ “နိုင်ငံရေး ပါတီနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ” ဆိုတာတွေဟာ င့ါလက်ခုပ်ထဲကရေ လို့ ပြောတာပါ။
“၂၀၁၂ ဧပြီလ၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ” ဆိုတာ ဒီချုပ်ပါတီကို လွှတ်တော်ထဲဝင်အောင် ကျုံးသွင်းတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှာ “သူ့ကော်မရှင်အပေါ်လည်း အမြင်လှစေ/ဒီချုပ်ပါတီလည်း လွှတ်တော်ထဲဝင်စေ” ဆိုတဲ့ မျှော်မှန်း ချက်နဲ့“အလွတ်လပ်လွန်းအောင်”တမင်တကာ“ဟပေး/လွှတ်ပေး”ခဲ့တာပါ၊ နောင်မှာပြုလုပ်ပေးမယ့် ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကို “၂၀၁၂ ကြား ဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ” ကဲ့သို့ “ဟပေး/လွှတ်ပေး”တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောချင်တာပါ။
ဗိုလ်တင်အေးပြောတဲ့အထဲမှာ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်မှု (Election campaign)ဟာ “ဆန္ဒပြနေသလား၊ ၈၈ အရေးအခင်းပြန်ရောက်နေသလားမှတ်ရတယ်၊ နဖူးစီးလည်းပါတယ်။ ကြယ်ငါးပွင့်အလံလည်းပါတယ်။ဘယ်သူကမှလည်း ကန့်ကွက်သူ မရှိဘူး။ ကန့်ကွက်ရင် ကျနော်အရှုံးပေးပစ်မှာပါ။ ၂၀၁၅ မှာ ကန့်ကွက်ပါ။ ကျနော်အရှုံးပေးပစ်ပါမယ်” ဆိုတဲ့အချက်ကို သတိပြုမိကြပါ လိမ့်မယ်။
ပြည်သူများအတွက်တော့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ဆန္ဒပြပွဲပါပဲ။ ဗိုလ်တင်အေးတို့လိုစစ်အုပ်စုအဖို့ လူစုလူဝေး၊ သပိတ်မှောက် ခြင်း၊ လူထုဆန္ဒပြမှုတို့ဆိုတာ သွေးလေခြောက်ခြားစရာတွေပါ။ “ ၈၈အရေးတော်ပုံကြီး”တို့၊ “ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး”တို့ဟာ သူတို့ အတွက် တကယ့်(shock)ရှော့ခ်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ စုကြ၊ ရုန်းကြ၊ စည်းလုံးညီညွတ်ကြပြီဆိုရင် စစ်အာဏာရှင်တွေ၊ စစ်အုပ်စုတွေ ကြောက်ဒူးတုန်ကြပါတယ်။
“ ၈၈အရေးတော်ပုံကြီး” ကဲ့သို့ လူထုအုံကြွမှုကြီးတွေဟာ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ဇီဝ်ိန်ကိုနှုတ်ယူနိုင်တယ်၊ သူ့တို့ယူထားတဲ့ အာဏာကို လက်လွတ်သွားအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိထူးရှိတယ်ဆိုတာ သူတို့ကောင်းကောင်းကြီးသိပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်လူစုလူဝေးမြင်ရင် သူတို့သွေးလေခြောက်ခြားကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်တစ်ဖက်က ပြည်သူများအတွင်း သွေးစည်းညီ ညွတ်မှုပြိုကွဲ၊ပျံ့ကြဲနေအောင် လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေးသွေးခွဲရန်တိုက်မှုတွေကို အစီအစဉ်ရှိရှိလုပ်ကြံဖန်တီးနေပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်က လည်း ပေါ်ပေါက်လာနေတဲ့ ဆန္ဒပြမှုတွေကို “ပုဒ်မ၁၈” နဲ့ တားမြစ်၊ချုပ်ချယ်၊ကန့်သတ်နေပြီး၊ လူထုအုံကြွမှုကြီးတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရင် အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းနိုင်ဖို့အတွက် (EU)က လာပြီး လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေတဲ့ “လူထုအုံကြွမှုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးသင်တန်း”တွေကို ဖုတ်ပူမီးတိုက်လေ့ကျင့်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်တင်အေးက “လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ (Election Campaign) ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်မှု အချိန်၊ လူ၊ နေရာကန့်သတ်မယ်၊ မဆိုင်တဲ့လူ လာမပြောနဲ့ ၊ ဝင်ချင်ဝင် မဝင်ချင်နေ၊ ဒါသူ့လုပ်ပိုင်ခွင့်” လို့ ဆိုပြီး ဟိန်းဟောက် စိမ်ခေါ်နေပါတယ်။
အုပ်စိုးသူတွေဘက်က ပိတ်ပင်မယ်၊ ကန့်သတ်မယ်၊ ချုပ်ချယ်မယ်၊ ဖိနှိပ်မယ်၊ အကြမ်းဖက်ချေမှုန်းမယ် ဆိုရင် အုပ်စိုးခံတွေ၊ ပြည်သူတွေဘက်က လုပ်စရာကတော့ ရဲရဲအာခံ၊ ရဲရဲချိုးဖောက်၊ ရဲရဲတော်လှန်မယ်ဆိုတဲ့ လမ်းကလွဲလို့ အခြားနည်းလမ်းမရှိပါကြောင်း။
5 Responses to တူမောင်ညို – နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲ ဟာ ဗိုလ်တင်အေး လက်ခုပ်ထဲက ရေ
Htwe on April 17, 2014 at 6:11 am
I, strongly agree with you. Thanks for the article! Everyone should aware on it.
Maung Pyaw Chin on April 17, 2014 at 1:21 pm
ကြားဖူးမှာပါ။မြန်မာစကား။ ‘‘ ခွေးဟောင်တိုင်းထကြည့်၇င်အိပ်ေ၇းပျက်ယုံဘဲတဲ့ ’’။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်မဲဆွယ်ခွင့်မ၇လို.လဲ‘‘ အမျိုးသားဒီမိုကေ၇စီအဖွဲ.ချူပ်’’ ၂၀၁၅ေ၇ွးကောက်ပွဲ မှာ၇ှုံးစ၇ာမမြင်ပါဘူး။ တကယ်လို.၂၀၁၅ေ၇ွးကောက်ပွဲကအမှန်ဘဲလွပ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ေ၇ွး ကောက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ် ဆို၇င်ပေါ့။သက်ဆိုင်၇ာကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေနဲ.‘‘မိမိကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၇ဲ.အမျိုးသားဒီမိုကေ၇စီအဖွဲ.ချူပ်မှဦးဘယ်သူ၊ဒေါ်ဘယ်သူပါလို.’’ပြောပြီးစည်း၇ုံးေ၇းဆင်း၇င်တောင်ဘာမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၇ဲ. ‘‘အမျိုးသား ဒီမိုကေ၇စီအဖွဲ.ချူပ်’’မနိင်စ၇ာမ၇ှိပါဘူး- သိတဲ့အတိုင်းမြန်မာပြည်သူလူထုအများစုက ‘‘ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်’’လို.မြော လိုက်တာနဲ. ‘‘ဟုတ်ကဲ့၇ှင့်၊ဟုတ်ကဲ့ခင့်ဗျာ့’’ ပြီးသားပါ။
U Aye on April 17, 2014 at 3:08 pm
People should not follow their relegious diversion. We must remove military detaitership first. Unity among people is very important.
Thet Naing on April 17, 2014 at 7:36 pm
စစ်အုပ်စုက တိုင်းပြည်ကို ” ဒီလူကရေစီစနစ် ” နဲ့ သွားဖို့ လုပ်နေတာပါ။ ဒီလိုသွားနေပုံ့ တော့နဲ့တော့ သွားပါများ ခရီးပျောက်ဖို့သာ ရှိပါတယ်။ ညဉ့်နက်လေ သန်းခေါင်တိုင်လေ၊ ညတာရှည်လေ အိပ်မက်များလေ၊ တောနက်လေ ဆင်ချေးထူလေ ဖြစ်လာပြီဗျို့။ စစ်မျက်နှာသစ်တစ်ခု ဖွင့်ဖို့လိုပြီ။ ကျနော်တို့ နည်းလမ်း ရှာကြစို့ဗျာ။
Kill_the_Devil on April 18, 2014 at 5:09 pm
No body will vote Gangs of Thugs,Thieves & Crooks (USDP),no matter How they trick & cheat in 2015 election.
They have been proving ;
 How they committed crime ,How they abuse the power & treated our people like slaves . – THUGS
How they steal our country wealth belong to us – THIEVES
 How they lie & cheat to our innocent people – CROOKS